Fifantenana ho mpikamban’ny FFM : hamerina ny 2002 ireo gadra politika raha tsy omena seza | NewsMada
Fifantenana ho mpikamban’ny FFM : hamerina ny 2002 ireo gadra politika raha tsy omena seza
Par Taratra sur 11/08/2017
Nampiaka-peo noho ny fitadivana tombontsoa manokana sy seza. Tsy faly ireo mitonona ho gadra politika manoloana ny fifantenana ny ho mpikambana eo anivon’ny Filankevitry ny fampihavanana (FFM), amin’izao fotoana izao.
Tsy mbola miova amin’ny amboletra natao tamin’ireny krizy ireny. “Misy mitady ny hamerenanay ny 2002 sy ny 1991 eto… Tsy misy mangarahara ny fifantenana ireo mpikambana. Efa nifanarahana fa tokony ho anisan’ny mpampihavana koa izahay gadra politika”, hoy Rakotomalala Henri na i Riribe, omaly. Notsiahiviny avy eo fa efa anisan’ireo 24 tafiditra avy amin’ny faritra Atsinanana ny tenany nefa izao voatsipaka izao. Efa nanao pimaso amin’ny mpitondra ihany ry Coutity, herinandro vitsy lasa izay, tamin’ny alalan’ny haino aman-jery ary nanaratsy sy nanenjika an-dRavalomanana, saingy izao voadingana tsy anisan’ny handalo sivan’ny FFM izao.
Midika izany aloha fa tsy faly ireto gadra politika ireto. Diso paikady sy tetika izy ireo satria tsy tokony ho anisan’ny mpampihavana fa anisan’ireo hampihavanina koa. Tsy mitovy firehana ary nifampitifitra na nifampihantsy izy ireo tamin’ireo krizy nifandimby teto amin’ny firenena. Nanomboka ny 1991, nitohy ny 2002 ary hatramin’ny 2009, farany teo. Tahaka izany koa ireo mpanao politika marobe, anisan’ny ireo hadinina etsy Anosikely amin’izao fotoana izao. Nifandrafy sy tsy nitovy hevitra izy ireo. Avy amin’ny ankolafy samihafa nefa hampihavana… Tsy hampihavana izany ireo fa hitady ny tombontsoany sy ny sezany fotsiny… rehefa nandalo tany efitra ara-politika nandritra ny taona maromaro. Zara aza tsy misy fifidianana fa hotendrena… Midika koa ireo fa lany olomanga sy olobe manana fahendrena sy ny maha izy azy ny fampihavanana eto amintsika… Ny eo ihany no miverina sy mifamadibadika fotsiny… Miketrika seza hatramin’ny gadra politika.